KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Natiijadda Doorashooyinka Degmadda Hargeysa & Israsaaseyn ka dhacay Magaalada
Friday 7 December 2012 08:43
Natiijadda Doorashooyinka Degmadda Hargeysa & Israsaaseyn ka dhacay Magaalada
Hargeysa (KON) - Guddida Doorashooyinka Somaliland ayaa Xalay ku dhawaaqay Natiijadda Codbixinta Doorashooyinka ee Degmadda Hargeysa.
Natiijaddaan oo oo Warbaahinta loo Bandhiga ayaa Kaalinta Koowaad ka galay Xisbiga KULMIYE oo helay 7 Kursi.
Kaalinta labaad ayaa waxa soo fadhiistay ururada siyaasadeeda Xaqsoor, UCID iyo Wadani oo helay min 4 Kursi.
Kaalinta Saddexaad waxaa galay Urur siyaasadeedka UMADDA Oo 3 kursi.
Kaalinta Afraad Dalsan oo helay 2 Kursi.
Kaalinta Shanaad Rays 1 Kursi.
Dhinaca kale Markii lagu dhawaaqay Natiijadda Codbixinta ayaa Magaalada ka bilaawday Rabsho iyo in Hub la isku adeegsado.
Lama oga cid wax ku noqotay rasaasta tiradda badan ee ay ciidamadda boolisku ku ridayaan dadka mudaharaadka soo qaban qaabiyay.
Wararka soo gaaraya KEYDMEDIA ONLINE ayaa sheegaya in Dhaawac ka dhashay Iska Horimaadkaas.
Keydmedia Online - Xafiiska Hargeysa